Diki Hotera Bvudzi Rinomesa, Magetsi Emagetsi, Kurema Kwehuremu - AOLGA
AOLGA Bvudzi rinoomesa
AOLGA Muchina weKofi
AOLGA Electric Keturu
AOLGA Magetsi simbi
Electric Keturu GL-E5B
Aolga Magetsi Iron SW-605
Yemagetsi Pasiwedhi Safes K-JG003
Bvudzi Dryer DM-DF06
Kuvimba neHong Kong uye kwakavakirwa muShenzhen, Aolga anga achiomerera kune bhizinesi pfungwa yekuva pragmatic, inoshanda, yakatsiga uye yakavimbika yakatarisana nenyika kubva payakagadzwa. Nechinangwa chekugadzira yepasi rose kirasi yemhando yakachengeteka uye yakavimbika yepamusoro-kumagumo emagetsi zvigadzirwa, Aolga inopa vatengi vedu zvigadzirwa zvepamusoro uye zvemhando yepamusoro zvekugamuchira vaeni kuburikidza nekubatanidzwa kweR&D, kugadzira uye kutengesa.
ATM 2021: NH Dubai iyo Palm kuvhura izvi ...
NH Mahotera ndeyekutanga kuMiddle East gare gare gore rino nekumisikidzwa kweNH Dubai iyo Palm. Parizvino mumatanho ekupedzisira ebudiriro, iyo nyowani-inovaka 533-kiyi chivakwa ichavhura madhoo ayo muna Zvita. Inowanikwa pa ...
Atlantis, iyo Palm inotanga zviwanikwa zvitsva ...
Atlantis, Dubai iri kutsigira vezvekutengeserana kupfuura nakare kose, nenzvimbo dzekugara 'dzekutanga dzakatsaurwa online sosi peji. Yakagadzirwa chete yevatambi vekushambadzira vekufamba, chikuva chinopa kuwedzera ...
Mashandisiro AOLGA Capsule Coffee Machine ...
Kofi nyowani uye inopisa inomutsa uropi hwako uye inopa kukurumidza kuzorora mune rimwe zuva rakabatikana. Nekudaro, kana iwe uchida kunakirwa nekofi yako, danho rekutanga kudzidza mashandisiro akanaka eako AOLGA Capsule Coffee Machine AC-514K ...